Kabtanka xulka qaranka Portugal iyo kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa u adkaysan kari waayay in uu ka aamusnaado xaalada xun ee ku xeeran kiiska kufsiga ah ee lagu soo eedeeyay wuxuuna xalay go’aansaday in uu soo saaro war saxaafadeed dheer iyada oo sidii aanu idiin soo gudbinay uu qoraal dheer soo saaray qareenka Ronaldo kiiskan ka difaacaya ee Peter Christiansen.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa dhawr qodob oo muhiim ah oo laga fahmay war saxaafadeedkii uu soo saaray qareenka Cristaino Ronaldo ee Peter Christiansen kaas oo uu si toos ah ugu hadlayay magaca xidigan oo uu cadeeyay in uu ka aamusnaan kari waayay halka ay xaaladu marayso.
Toddobaadyadii u dambeeyey, waxa laacibkan ruxay kiis ay dib u fureen booliska magaalada Las Vegas ee dalka Maraykanka oo loo gudbiyey dacwad la xidhiidha kufsi ku kacay, kaas oo bilowgiisii hore ay ciidamada ammaanku ogaadeen markii uu dhacay hase yeeshee ay dhibbanaha ka waayeen caddaymo iyo inuu u sheego ciddii falka kufsiga kula kacday.
Haddaba halkan kaga bogo qodobada aanu idiinka soo saarnay war saxaafaadeedkii aanu xalay idiin soo gudbinay ee uu soo saaray qareenka Ronaldo ee Peter Christiansen halkan ayaanad kaga bogan kartaa.
1- Waxa Uu Qareenka Ronaldo Cadeeyay In Xidhiidh Galmo Uu Dhex Maray Ronaldo iyo Katheryn Mayorga.
Waxa uu qareenka Cristaino Ronaldo ee Peter Christiansen uu si cad u sheegay in xidhiidh galmo uu dhex maray Ronaldo iyo gabadha hadda kiiska kufsiga ah ku soo eedaysay wuxuuna ugu horayn meesha ka saaray murankii hore ee jiray ee ahaa in ayna Ronaldo iyo gabadha kulmin.
Peter Christiansen ayaa qiray in uu jiray xidhiidh jinsi oo dhex maray Cristaino Ronaldo iyo Katheryn Mayorga taas oo ugu yaraan cadaysay in isla waqtiga ay gabadhani dhibaatada sheegaynayso ay wada joogeen Ronaldo isla markaana ayna arintaasi ahayn mid la been abuuray.